Ny Governemanta Cantabria dia manambara ny endriny orinasa vaovao | Famoronana an-tserasera
Ny Governemanta Cantabria dia manambara ny endriny orinasa vaovao
Mercedes Big Real | | Graphic Design, Inspiration
Ny Governemanta Cantabria dia manambara ny endriny orinasa vaovao tamin'ny faran'ny fifaninanana ho an'ny fanavaozana ny sary izay naroso tamin'ny volana oktobra lasa teo, nanondro ny mpandresy ny Mpamolavola Cantabrian, Rafael San Emeterio.
Rafael de la Sierra, minisitry ny fiadidiana ny fitsarana sy ny fitsarana dia nanambara ny fanapahan-kevitry ny mpitsara ary niarahaba ny tanora mpamorona endrika. Ankoatry ny fanondroana ny endrika tsara sy ny fampiharana azo atao dia naneho hevitra izy fa I Cantabria no hany vondrom-piarahamonina mahaleo tena hatreto izay tsy nanana sary natao ho an'ny fampahalalam-baovao ankehitriny.
Ny bokiny momba ny tolo-kevitra momba ny sary vaovao dia milaza ny fomba famolavolana tsotra sy mahitsy izy io dia miasa tsara amin'ny lafiny iray mihena amin'ny fampiharana samihafa, toy ny tranokala ofisialy, habaka anatiny na fitaovam-pitaterana, toy ny karatra fandraharahana na ny famolavolana taratasy sy antontan-taratasy. Raha ny tenin'ilay tanora mpamorona dia "fanazaran-tena amin'ny syntetika" ny endriny, ireo singa mampiavaka ny ampinga dia naseho tamin'ny "tanjaka sary".
Notaterina fa aorian'ny fandresena amin'ny fifaninanana fanavaozana dia hanomboka ny boky style. Andrasana izany ny sary vaovaon'i Cantabria, mety ho vonona amin'ny lohataona 2017. Ny boky torolàlana momba ny sarin'orinasa dia hatao eo ambanin'ny asan'ny mpamorona sy ny ekipa teknikan'ny Birao Fanontana Faritra. Aorian'izay, hisy ny didim-panjakana izay handamina ny fampiasana azy, tsy maintsy atao amin'ny minisitera rehetra izany.
Raphael San Emeterio
Ity mpamorona Cantabrian ity, manana tantara lava eo amin'ny sehatry ny famolavolana sary. Mianatra ao amin'ny Sekolin'i Artista Ambony La Rioja (ESDIR). Manana traikefa amin'ny talen'ny endrika sy kanto ao amin'ny masoivoho mpamorona como el Flatland, Fraile & Blanco o Calcco ary amin'ny maha-mpiasa tsy miankina amin'ny firenena sy ny masoivoho iraisam-pirenena. Azo lazaina fa olona mavitrika izy. Mandraisa anjara amin'ny fampiratiana vondrona toa ny Vibration tsara, izay misy mpanakanto marobe manavao amin'ny fiteny kanto samihafa, mizara hatsarana avant-garde. Ankoatry ny fandraisana anjara amin'ny maha mpandahateny amin'ny hetsika toa Behance, fanoharana, marika, fonosana natao, natao tamin'ity taona ity.
Azonao atao ny mahita ny portfolio-n'ny mpamorona eto.
Raha te-hanadihady bebe kokoa momba ny famolavolana indray ianao dia afaka mandeha eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Ny Governemanta Cantabria dia manambara ny endriny orinasa vaovao
Ajanony ny Motion ho teknika ankehitriny
Torohevitra 5 hanaovana logo famantarana matihanina